Kè ahia maka oke uru! Chọta Onye ahia ahia kachasị mma! Ọnwa Abụọ 2021
Mụọ 2 Trade 2021 Ntuziaka Na Trakè ahia!
Oke ahia bu usoro nke itinye ihe eji etinye ego na ntinye ego gi. N'ime ime nke a, ị ga - enwe ike azụmaahịa karịa ego karịa na akaụntụ gị.
Ọ bụ ezie na oke ahia nwere ike ịkwalite uru gị, ọ nwekwara ike ịkọbawanye mfu gị. N'iburu nke a n'uche, ịkwesịrị inwe nghọta siri ike banyere etu oke azụmaahịa si arụ ọrụ tupu iwere ya.
In our Mụta 2 Trade 2021 Guide On Margin Trading, anyị na-akọwa ihe niile ịchọrọ ịma. Ọ bụghị naanị na anyị na-ekpuchi ins na outs nke etu oke azụmaahịa si arụ ọrụ, mana anyị na-atụlekwa ndị na-ere ahịa kacha mma ịmalite taa.
Mara: Ọ bụrụ na azụmaahịa gị na - emegide gị karịa karịa ị nwere na akaụntụ oke gị, onye na - ere ahịa ga - agbagha ahịa ahụ. Nke a pụtara na ị ga-atụfu oke gị dum.
Gịnị bụ oke Trading?
N'ime ụdị ya kachasị mkpa, azụmaahịa azụmaahịa na-ezo aka na usoro nke itinye ihe mgbakwunye na azụmaahịa gị. Ma ọ bụ Forex, ebuka, indices, cryptocurrencies, ma ọ bụ ngwaahịa - ị nwere ike ị na-etinye ihe ntinye ego na klaasị ọ bụla ị họọrọ. N'ime ime nke a, ị na - azụ ahịa nke ọma karịa ego karịa na akaụntụ gị. Nke a bụ n'ihi na ị na-agbazi ego n'aka onye ịhọtara na-azụ ahịa, nke n'aka nke ya, ga-adọta ego ego.
N'ihe banyere otu o si arụ ọrụ, ị ga-ahọrọ ọnụọgụ ego ịchọrọ ịchọrọ na azụmaahịa gị. Iji maa atụ, ka anyị kwuo na i nwere njikwa akaụntụ nke $ 500, ma tinye itinye ego nke 10x. Na tiori, nke a pụtara na ị na-ere ahịa na oke nke $ 5,000. Yabụ, ọ bụrụ na ị mee 5% na azụmaahịa ahụ, uru gị ga-abawanye site na $ 25 ruo $ 250.
N’akụkụ nke ọzọ, ụdịdị dị iche iche, ọghọm gị ga na-akawanye njọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ahia dị n'elu gbadara na 2%, uru gị ga-abawanye site na $ 10 na $ 100. N'agbanyeghi ego ole ị kpebiri itinye, ịkwesịrị itinye 'oke'. Nke a dị ka nkwụnye ego nke onye na-ere ahịa na-ejide ya ruo mgbe emechiri ahịa ahụ.
Ọ bụrụ na mmetụta, ọ bụrụ na ahia ahụ ga-emegide gị karịa karịa ka ị nwere n'akụkụ, mgbe ahụ onye na-ere ahịa ga-emechi azụmahịa gị na akpaghị aka. A maara nke a dị ka 'mmiri mmiri', ọ pụtara na ị ga-atụfu oke gị n'ozuzu ya. Nke a bụ ihe kpatara ị ga - eji nwee nghọta siri ike banyere etu oke azụmaahịa na itinye ego na - arụ ọrụ, ebe ị nwere ike idafu nnukwu ego ma ọ bụrụ na ịnweghị usoro nchekwa nkwụsị achọrọ.
Kedu uru na ọghọm nke azụmaahịa dị oke?
Na-azụ ahịa karịa ihe ị nwere na akaụntụ azụmaahịa gị
Meewanye uru gị na-enweghị mkpa itinye ego ọzọ
A na-enweta ya n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ klas ọ bụla nwere ike ichetụ n'echiche
Enwere ike iji ahia ahia na iwu di nkenke
Imirikiti ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na-enye oke
Nwere ike ịwụnye iwu nkwụsị na-egbochi mfu gị
Atụmatụ ahia ahia dị oke egwu
I nwere ike tufuo oke gị dum site na otu azụmaahịa
Adabaghị maka ndị ahịa ọhụụ
Kedu ka oke ahia si arụ ọrụ?
Enwere ọtụtụ ihe ị ga-amụta banyere azụmaahịa oke, yabụ anyị ga-akwatu usoro ntọala site na ntinye.
Nke mbụ, a na-enwekarị echiche na-ezighị ezi na itinye ihe na oke dị na ya na-ezo aka na otu ihe. Ọ bụ ezie na ha na-emekọrịta ihe ọnụ, e nwere obere ihe dị iche. Na a nutshell, mgbe leverage na-ezo aka multiple na ị na-eme atụmatụ itinye na ahia gị, oke na-ezo aka na nkwụnye ego mbụ nke onye na-ere ahịa ga-achọ n'aka gị.
Yabụ, egosiputara leverage dịka ma 'oke' ma ọ bụ 'otutu'. Iji maa atụ, nke a nwere ike ịbụ 5x na 5: 1, ma ọ bụ 10x na 10: 1. Maka ebumnuche dị mfe, anyị ga-atụle ntinye ego dị ka otutu, mana mara na ụfọdụ ndị na-ere ahịa nwere ike igosipụta ya dịka oke. Ka o sina dị, ọnụọgụ ego ị kpebiri itinye ga-ekpebi ego ahia gị kwesịrị.
Ka anyị kwuo na ị na-achọ ịga ogologo na ebuka Apple
Have nwere $ 1,000 na akaụntụ gị, mana ịchọrọ itinyekwu ego
Ka o siri dị, ị na-etinye mpempe akwụkwọ nke 5x
Nke a pụtara na iwu ịzụta Apple gị ruru $ 5,000 ugbu a
Dị ka ihe atụ ahụ dị n'elu, ka anyị kwuo na mgbe emesịa n'ime izu Apple na-abawanye site na 10%. Nkịtị, ị gaara akpata $ 100 uru, dị ka nguzozi gị bụ $ 1,000. Otú ọ dị, dị ka ị na-etinye leverage nke 5x, anyị kwesịrị ịbawanye nke a site na 5. Dịka, ị bara uru nke $ 500.
Na na-ekwu, anyị kwesịrị ịtụle ihe ga-eme ma ọ bụrụ na gị Apple ngwaahịa ahia gara nke ọzọ.
N'ịnọgide n'otu ihe atụ ahụ dị n'elu, ị nwere iwu ịzụta $ 1,000 na Apple na ntinye nke 5x
Mgbe izu ahụ gasịrị, ebuka Apple na-agbadata uru site na 5%
Nkịtị, ị gaara efu 5% nke $ 1,000 - nke bụ $ 50.
Agbanyeghị, itinye n'ọrụ 5x, yabụ ihe ọghọm gị ruru $ 250
Dịka ị pụrụ ịhụ, ntinye ego abụghị naanị metụtara ahịa na-emeri, mana ịla n'iyi kwa.
Yabụ ugbu a ị matara etu leverage si arụ ọrụ, anyị kwesịrị ileba anya na oke ịchọrọ. Na ya kasị mkpa ụdị, oke bụ prefront nche na ore ahia na-achọ n'aka gị na-enwe ike ahia na leverage. N'okwu Layman, nke a pụtara nha azụmaahịa gị n'enweghị ego.
Iji maa atụ, ka anyị kwuo na i nwere $ 500 ma tinye ihe leverage nke 10x. O doro anya, nha ahia gị ruru $ 5,000 - mana, oke gị bụ naanị $ 500. Dịka, nke a bụ ego ị ga-achọ ịnwe na akaụntụ gị iji nweta ahịa ahụ. A na-etinye ya na akaụntụ 'oke' gị ruo mgbe azụmahịa ahụ mechiri.
Iji rụpụta ókè ole ị ga - achọ itinye, ị ga - ele anya na otutu.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụ ahịa na ntinye nke 10x, oke achọrọ bụ 10% (1/10)
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụ ahịa na ntinye nke 30x, ị ga-etinye oke nke 3.33% (1/30)
Nke a dị ezigbo mkpa ịghọta, dịka akụkụ gị dum nọ n'ihe egwu mgbe ị na-azụ ahịa na ntinye ego.
N'ịdabere na nkebi nke dị n'elu n'akụkụ peeji, anyị kwesịrị ịtụle ihe 'mmamịrị' pụtara. Dịka e kwuru na mbụ, nke a ga-eme ma ọ bụrụ na azụmaahịa gị na-emegide gị karịa karịa na akaụntụ gị.
Ka anyị kwuo na itinye n'ọrụ leverage na iwu ịzụta na GBP / USD
I tinyela $ 100 na ntinye aka nke 20x
Nke a pụtara na ahia gị bara uru $ 2,000
Oke gị nke $ 100 ruru 5% nke ogo ahia
Ọ bụrụ na azụmahịa GBP / USD gị na-aga n'ihu gị site na 5%, onye na-ere ahịa ga-agbapụta ọnọdụ ahụ
Nke a pụtara na ahia na-akpaghị aka na-emechi ma ị tufuo gị $ 100 oke
Dị ka ị pụrụ ịhụ site n'elu, ị ga-mmiri mmiri ma ọ bụrụ na ahia ahụ na-emegide gị site na 5% - nke bụ oke oke nke ị debere.
N'ihe atụ ọzọ, ọ bụrụ na itinye iwu $ 1,000 na ntinye nke 2x, oke gị ga-abụ 50% - ma ọ bụ $ 500. Dị ka ndị dị otú a, ị ga-enwe nnukwu nchekwa nke 50% tupu ị gbanye ahia gị, nke dị ọtụtụ ihe ize ndụ-ịjụ karịa ahia na 20x.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ị nwere nhọrọ nke izere ịmịcha mmiri. A maara dị ka 'oke oku', onye na-ere ahịa ị họọrọ ga-agwa gị mgbe ị na-eru nso ọnụahịa mmiri gị.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị na-ere FTSE 100 na ntinye nke 25x. Nke a pụtara na oke gị dị 4%. Ka anyị were ya na ahia gị na-emegide gị site na 3.8% - nke dị n'okpuru oke oke gị nke 4%.
Ozugbo ị nwetara oku gị n’akụkụ site na ore ahia, ị ga-enwe otu n’ime ụzọ abụọ:
Nhọrọ mbụ bụ ime ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na FTSE 100 na-aga n'ihu imegide gị wee merie akara 4%, ahia gị ga-agba mmiri na onye na-ere ahịa ga-echekwa oke gị.
Nhọrọ nke abụọ bụ ịgbakwunye ego na akaụntụ gị. Nke a ga - enye gị ohere iku ume ọzọ ma gbochie azụmaahịa gị ịbụ mmiri mmiri - opekata mpe maka oge ahụ.
Ka anyị were ya na i tinyeburu akụkụ dị $ 500.
You're na-azụ ahịa na ntinye nke 25x, nke pụtara na azụmaahịa gị ruru $ 12,500.
Na-abịaru akara ngosi 4%, nke pụtara na ị na-eguzogide ihe ọghọm nke ịhapụ oke $ 500
Ya mere ị kpebiri ịgbakwunye $ 500 ọzọ na akaụntụ gị
Na tiori, nke a pụtara na ị ka zụtara onwe gị mgbakwunye 4%
Nke ahụ bụ ịsị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na etinyere 4% liquidation mbụ, azụmahịa gị ga-emeghe ka ị gbakwunyere 4% ọzọ na oke!
Na ngwụcha, ọ bụ ezie na ịtinye oke oke ga-egbochi gị ịmịpụ gị na obere oge ma ọ bụrụ na ahia ahụ na-aga n'ihu megide gị na onye na-ere ahịa mechiri ahịa gị, ego ị ga-efufu ga-akawanye njọ.
Mara: O yighị ka ị gaghị anata oke 'ịkpọ oku' n'ụdị kachasị. Kama nke ahụ, a ga-amara gị ọkwa site na ozi email ma ọ bụ ozi mkpanaka.
Esgwọ dinggwọ Margwọ Margwọ
N'elu ego azụmaahịa gị na-adịkarị, azụmaahịa oke na-abịa na ụgwọ ndị ọzọ. Ihe bu ụzọ na nke a bụ ego abalị.
N'agbanyeghị ego ole ị kpebiri itinye n'ọrụ gị, ị ga-akwụ ụgwọ ego ị na-akwụ ụgwọ n'abalị. Nke a bụ ego onye na-ere ahịa na-akwụ maka ịgbazinye gị ego iji zụọ ahịa na leverage. A sị ka e kwuwe, ị ga-azụ ahịa karịa ego karịa na akaụntụ gị - yabụ ọ bụ ihe ezi uche dị na nke a kwesịrị ịkwụ ụgwọ.
N’ụzọ dị mkpa, ego abali na-arụ ọrụ dị ka ọmụrụ nwa na mbinye ego. N'ihe banyere ịzụ ahịa oke, ị ga-akwụ ụgwọ maka ụbọchị ọ bụla ị ga-emeghe ọnọdụ gị. Ka o siri dị, ogologo oge ị na-ere azụmaahịa gị n'ahịa, ka ị ga-akwụkwu ụgwọ. Nke a nwere ike inwe mmetụta kpọmkwem na ike gị ịme uru, yabụ ọ dị ezigbo mkpa ka ị nyochaa ego ole ị ga-akwụ.
Ozi ọma ahụ bụ na ọtụtụ n'ime ndị na-ere ahịa na anyị na-akwado ka ị gosipụta ụgwọ ego gị na abalị na dollar na cents. Nke a pụtara na ị ga - enweta ezumike zuru oke nke ego ị ga-akwụ kwa ụbọchị. N'ọnọdụ ụfọdụ, ị ga-akwụ ụgwọ ego maka idobe ọnọdụ ahụ na ngwụcha izu. Nke a ga-adabere na akụ ị na-azụ ahịa, yana onye na-ere ahịa ị na-eme nke a.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na a ga-ewepụ ego akwụ ụgwọ gị n'abalị site na oke oke gị. N'iburu nke a n'uche, ị ga-anọ nso nso na ọnụahịa mmiri gị maka ụbọchị ọ bụla na ị ga-emeghe ọnọdụ ahụ.
Tragwọ ahia ndị ọzọ
N'elu ego ị na-akwụ ụgwọ n'abalị, ị ga-ewere ya mgbasa na ịzụ ahịa ọrụ na akaụntụ.
Kesaa: Nke a bụ ihe dị iche n’etiti ịzụta na ire ego nke ngwa ahịa ị họọrọ. Ebe mgbasawanye dị elu, otu ị ga-esi akwụ ụgwọ na-akwụghị ụgwọ.
Commission: Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-ere ahịa na-akwụ ụgwọ ọrụ azụmaahịa, ndị ọzọ anaghị eme ya. Ọ bụrụ na-ebo gị ebubo, mgbe ahụ nke a bụkarị pasent megide ego ị na-azụ. Dịka ọmụmaatụ, ọrụ 1% na azụmaahịa $ 200 ga-efu gị $ 2.
Etu ị ga - esi mebie ihe egwu dị na ahia
Yabụ ugbu a ị matara nsogbu ndị na-akpata oke azụmaahịa, anyị kwesịrị ileba anya ugbu a ụfọdụ n'ime ụzọ ndị ị ga - eme iji wee belata mfu gị. A sị ka e kwuwe, ọbụlagodi ndị ahịa nwere oge na-enweta ọghọm oge niile, n'ihi na nke a bụ naanị ọdịdị nke ohere itinye ego n'ịntanetị. Site na nke ahụ kwuru, ndị ahịa maara ọrụ mara etu esi belata mmefu ndị a site na ịwụnye iwu nkwụsị nkwụsị.
Wụnye usoro nkwụsị-nkwụsị ga-abụ ihe dị iche n'etiti ị na-efu a obere ego nke ego na ahia gi ma obu oke gi. Maka ndị na-amaghị, ịkwụsị iwu ọnwụ na-enye gị ohere ịkọwa ọnụahịa ọnụego ịchọrọ ka emechiri ahịa ahụ.
Iji maa atụ, ka anyị kwuo na itinye ntinye nke 10x na azụmaahịa $ 2,000. Nke a pụtara na ị ga-atụfu akụkụ gị dum ma ọ bụrụ na ahia ahụ na-emegide gị site na 10%. Obviously doro anya na ị chọghị ida 10%, yabụ na omume, ị wụnye usoro nkwụsị-ọnwụ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ iwelata ihe ọghọm gị gaa na 1%, mgbe ahụ ọ ga - adị gị mkpa igosipụta nke a na nkwụsị nkwụsị nkwụsị gị. Ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-ere ahịa Disney na $ 100 kwa otu, ọnụahịa nkwụsị gị ga-adị $ 99 na usoro ịzụta, yana $ 101 na ire ere.
Ọ bụrụ na mgbe nkwụsị nkwụsị ụgwọ gị is kpatara, onye na-ere ahịa ga-emechi ọnọdụ ahụ na akpaghị aka. Mee elu mee ala, nke a ga - egbochi gị ida nnukwu ego mgbe ị na - azụ ahịa na oke.
Kedu Akụnụ nke M nwere ike Tradezụ na oke?
Nwere ike itinye aka na oke ahia na ihe ọ bụla gbasara akụnụba a pụrụ ichetụ n'echiche.
Nke a gụnyere ihe niile site na:
Ọla siri ike
na ndị ọzọ
Site na nke a, ị ga-azụrịrị CFDs (nkwekọrịta-maka-iche) ma ọ bụrụ na ịchọrọ itinye ihe ntinye aka na akụ gị ahọpụtara. CFDs na-enye gị ohere ịkọ nkọ banyere ọnụahịa ọdịnihu nke akụ ahụ na-enweghị ịnwe onye nwe.
Ka o siri dị, agbanyeghị na CFD ị ahọpụtara ga-ehichapụ ọnụahịa ụwa nke ihe ị họọrọ, ị gaghị enwe ikike ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ coupon, ị gaghị enwe ikike ntuli aka ọ bụla.
Ozi ọma ahụ bụ na ndị na-ere ahịa CFD na-ejikwa ọtụtụ puku akụrụngwa ego - ihe niile ị nwere ike itinye n'ọrụ ya.
Oke ahia ahia
N'ihe banyere oke ahia ahia, nke a ga-adabere na ọtụtụ mgbanwe - dịka gị ma ị bụ onye na-ere ahịa ma ọ bụ ọkachamara ahịa, ụdị akụ ị na-azụ ahịa, na onye na-ere ahịa ị na-eji.
Ndị Ahịa Ọkachamara
Ọ bụrụ na ị bụ ọkachamara ahia, mgbe ahụ, ị ​​ga-enwe ike itinye dị ukwuu leverage dị ka ore dị njikere inye gị. N'ezie, nke a na-adịkarị 200x na ụfọdụ ndị na-ere ahịa. Nke a pụtara na ọ bụrụ na itinye naanị $ 2,000, ị ga-enwe ike iji $ 400,000 zụọ ahịa!
Site n'ikwu nke ahụ, ọ ga-adị mkpa ka ị gafee usoro nkwenye na onye na-ere ahịa ị họọrọ ka ị kpebisie ike ịbụ onye ahịa ọkachamara. Dịka ọmụmaatụ, ọ ga-abụrịrị na ị ga-ezute ọnụọgụ kacha nta, nke ị ga-achọ iji gosipụta n'ụdị dọkụmentị.
Kwesịrị igosipụta na ị nwere ahụmịhe azụmaahịa zuru oke. Ọzọkwa, nke a ga-adị mkpa site na ịnye akwụkwọ nke gosipụtara nke a.
Ndị ahịa ahịa
Ọ bụrụ na ịnweghị ike igosipụta na ị bụ ọkachamara azụmaahịa, mgbe ahụ a ga-ewere gị dị ka ndị ahịa azụmaahịa. Mgbe ị ka ga-enwe ike ịzụ ahịa na oke, a ga-ejedebe oke gị. Nke a bụ iji gbochie ndị ahịa na-enweghị uche ka ha ghara idafu nnukwu ego.
Oke a kapịrị ọnụ pụrụ ịdabere na ebe ị nọ. Dịka ọmụmaatụ, ndị ahịa UK na Europe niile nwere ikike site na njedebe nke European Security and Markets Authority (ESMA). Oke ndị a dabere na klas bara uru ị na-ere, ma dị ka ndị a:
30x: Isi Forex ụzọ abụọ
20x: ụzọ abụọ, ọla edo, na isi akwụkwọ
10x: Commodities ndị ọzọ karịa gold, na-abụghị isi indices
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụghị nwa amaala UK / European, ọtụtụ ndị na-ere ntanetị n'ịntanetị na-agbaso oke ndị edepụtara n'elu.
Otu esi amalite oke ahia taa
Dị ka ụda oke oke ahia ma chọọ ịmalite taa? Ọ bụrụ otu a, ugbu a anyị ga - enye gị usoro ntụpụ aka na ihe ị ga - eme.
Kwụ na 1kwụ XNUMX: Họrọ a Broker na-enye oke Trading
Firstzọ mbata gị nke mbụ ga-ahọrọ onye na-ere ahịa n'ịntanetị nke na-enye oke ahịa. N'ikpeazụ, ikpo okwu ọ bụla nke na-akwado CFDs ga-enye gị ohere ịzụ ahịa na leverage, yabụ ịkwesịrị ịtụle ọtụtụ mgbanwe ndị ọzọ tupu ịme mkpebi.
Nke a kwesịrị ịgụnye ụdị akụ ị nwere ike ịzụ ahịa, ụgwọ ego abalị, ọrụ, mgbasa, mgbasa, usoro ịkwụ ụgwọ, na nkwado ndị ahịa. N’uzo di nkpa, ikwesiri igba mbọ hu na onye ahia gi ahọrọ ka enyere gi ikikere FCA, CySEC, ma ọ bụ ASIC.
Ọ bụrụ na ịnweghị oge iji nyochaa onye na-ere ahịa na onwe gị, ị ga-ahụ usoro nyiwe anyị kachasị elu ise na njedebe nke ibe a. All nke anyị na-atụ aro Broka na-kpamkpam achịkwa, ekwe ka ị na-ahia na oke nke ruo 30: 1 (ọzọ maka ọkachamara ahịa), na-akwado ikpo nke ịkwụ ụgwọ ụzọ.
Ozugbo ịchọtara onye ahịa azụmaahịa kwesịrị ekwesị, ị ga-emepe emepe akaụntụ. Usoro a na - arụ ọrụ otu ihe n’agbanyeghi usoro ị na - eji, ebe ị ga - achọ ịnye ụfọdụ ozi nkeonwe.
Nke a ga-agụnye nke gị:
Ikwesiri ịza ajụjụ ụfọdụ gbasara ahụmịhe azụmaahịa gị mere. Nke a bụ n'ihi na ị ga - azụ ahịa na ngwaahịa leverage, yabụ na onye na - ere ahia kwesịrị ịma na ị nwere nghọta siri ike banyere ihe ị na - eme.
Kwụpụ 3: Nyochaa njirimara
Dịka ị ga-eji onye na-ere ahịa na-achịkwa, ị ga-enyochazi njirimara gị. Imirikiti nyiwe ga-ajụ gị maka akwụkwọ abụọ ọkachasị - NJ sitere n'aka gọọmentị na ihe akaebe nke ibi. Banyere nke mbụ, nke a nwere ike ịbụ paspọtụ, akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala, ma ọ bụ kaadị ID mba.
Nke ikpeazu - ichoro inye akwukwo nke ulo oba ego ma obu ihe banyere ihe banyere ya. Oge ọ na-ewe maka onye na-ere ahịa iji kwado akwụkwọ gị nwere ike ịdị iche iche. Na nke ahụ kwuru, ọtụtụ nyiwe anyị na-akwado nwere ike ime nke a ozugbo.
Kwụpụ 4: Nkwụnye ego
Ugbu a na nke gị akaụntụ enyochala, ikwesiri itinye ego. Ọzọkwa, nhọrọ ịkwụ ụgwọ a kapịrị ọnụ maka gị ga-adị iche na onye na-ere ahịa na onye na-ere ahịa, yabụ kpachara anya ịlele nke a tupu ịmepe akaụntụ!
Ọtụtụ mgbe, ị ga - ahọrọ ndị a:
Ọ ga-adị mkpa ka ị hụ na ịchọrọ obere ego nkwụnye ego. Ọzọkwa, leba anya na ego nkwụnye ego ọ bụla na usoro ịkwụ ụgwọ ị họọrọ.
Kwụpụ 5: Ahịa na oke
Dịla njikere itinye azụmaahịa mbụ gị. Rịba ama, ọ bụrụ na ị na-eji onye na-ere ahịa CFD mgbe ahụ, ị ​​gaghị mkpa mepee akaụntụ dị iche iji tinye leverage. Nke a bụ naanị ikpe ma ọ bụrụ na ị na-eji ụlọ ọrụ azụmaahịa ọdịnala. Dị ka ndị dị otú a, bido usoro site na ịchọ ngwa ọrụ ego ịchọrọ ịzụ ahịa.
Ozugbo ị matara ihe ị chọrọ ịzụta ma ọ bụ ire, ị ga-abanye:
Ọdụ: Nke a bụ ego ịchọrọ itinye n’ihe egwu. Ka anyị kwuo na ị gafere $ 500
leverage: Nke a bụ ọnụọgụ ego ịchọrọ itinye. Ka anyị kwuo na ị họrọ 3x
Dị ka nke dị n'elu, ị na-etinye $ 500 na ntinye nke 3x - na-ewere nha ahia gị niile na $ 1,500. Ya mere, oke a choro bu 33.3%. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na ahia gị na-emegide gị karịa 33.3%, ị ga-atụfu oke gị dum.
N'ikpeazụ, gosi usoro gị iji mebie ahịa ahụ.
Ebe ahia kacha mma na nyiwe nke 2021
Site na ọtụtụ narị ndị na-ere ahịa oke ala ugbu a na-arụ ọrụ na ohere itinye ego, ịmara ebe ikpo okwu iji debanye aha nwere ike ịbụ ihe ịma aka. Dị ka ndị dị otú a, anyị ga-atụle saịtị ise kachasị elu anyị nwere na 2021. Dị ka mgbe niile, gbaa mbọ hụ na ị ga - eme nyocha nke gị tupu ị banye!
1. eToro - Ntanetị ahia kacha mma maka ndị mbido
eToro bu uzo di nma banyere uzo ohuru ohuru. Firstly, ọ na-ewe naanị nkeji iji mepee akaụntụ ma bulite NJ gị. Mgbe nke ahụ gasị, ịnwere ike iji kaadi debit / kaadị, Paypal, Neteller, ma ọ bụ Skrill tinye ego ozugbo. Ozugbo e debere akaụntụ gị, ị ga-enwe ohere ịnweta ọtụtụ puku akụrụngwa ego.
Nke a gụnyere ihe niile sitere na ebuka, indices, ETFs, mmanụ, gas, na ọla edo. Won't gaghị akwụ ụgwọ ụgwọ azụmaahịa ọ bụla n'elu ikpo okwu, yabụ, ọ bụ naanị ịgbasa na ụgwọ ị ga-akwụ ụgwọ abalị ị kwesịrị ile anya. Nkwụnye ego pere mpe na-amalite na $ 200, na njedebe leverage dabara na ESMA.
Na nchikota, ahia di oke ala bu uzo esi etinye ego nke n’enye gi ohere ime ka ogha n’iru gi. Ọ bụrụhaala na ị na-eji ọkachamara CFD agbanwe, ị ga-enwe ike itinye ihe nkwụnye ego na ọtụtụ puku akụrụngwa ego. Nke a gụnyere ebuka, indices, gas, mmanụ, ọla edo, cryptocurrencies, na ọbụlagodi ọmụrụ nwa. Na tụgharịa akụkụ, oke trading na leverage nwekwara ike ịmụba gị losses.
Nke a bụ ihe kpatara ị ga - eji nwee nghọta siri ike banyere ihe egwu dị na ya tupu ị banye. Ka o sina dị, ọ bụrụ na i chere na ị nwere nkà achọrọ na ihe ọmụma iji nweta gị leverage ahia ọrụ malitere, anyị ga-atụ aro ka ị nyochaa otu n'ime nyiwe ise kachasị elu anyị tụlere na ibe a.
Oke ahia na-enye gị ohere itinye ego na ego karịa karịa na akaụntụ gị. Ka o siri dị, uru ma ọ bụ mfu ọ bụla ị mere ga-abawanye site nha nha ego ị họọrọ.
Ego ole ka m kwesịrị itinye mgbe m na-azụ ahịa?
The ego nke oke na ị ga-mkpa na-etinye na dollar na cents ga-adabere na ego nke leverage ị chọrọ itinye. Easiestzọ kachasị mfe iji gbakọọ ya bụ ịkekọrịta leverage ọtụtụ n'ime 1. Dịka ọmụmaatụ, ntinye nke 5x ga-achọ oke nke 20% (1/5), na 2x na oke nke 50% (1/2).
Kedu oke oke oke m nwere ike iji ahia
Nke a dabere na ma ị bụ onye na-ere ahịa azụ ahịa ma ọ bụ na ọbụghị. Ọ bụrụ na ị bụ, mgbe ahụ ọtụtụ ndị na-ere ahịa ga-ejide gị na 30: 1. Ọ bụrụ na ị bụ ọkachamara na ahia, nke a nwere ike ịga dị ka 500: 1.
Enwere m ike itinye ihe nkwụnye ego na ire ere n’otu oge
N'ezie ị nwere ike. N'ezie, ma ị kpebiri itinye ego maka ịzụta ma ọ bụ ire ahịa, ọ bụ gị ka ọ dị n'aka.
Kedu ihe ọ pụtara ịmalite mmịnye mmiri?
Ọ bụrụ na ahia gị na-emegide gị karịa ka ị nwere na akaụntụ gị, ahịa gị ga-agba mmiri. Nke a pụtara na onye na-ere ahia ga-emechi azụmaahịa ahụ n'aha gị, wee mechie oke gị.
Kedu ụdị oku dị oke?
A oke oku na-eme mgbe ị na-eru nso gị liquidation price. Na ore ahia na nnoo fọdụrụ gị na ọ gwụla ma i tinyekwuo ego na oke gị, ahia gị nwere ike ịbụ mmiri.
Margba ahia dị oke iwu?
Ee, oke ahia bụ iwu na ọtụtụ mba. Na nke ahụ kwuru, enwere ụkpụrụ iwu siri ike iji hụ na ndị ahịa na-enweghị uche anaghị atụfu ego karịa ka ha nwere ike ida.